Page 91 – Shwe Yaung Lan
[ July 29, 2021 ] ဘီလျံကြွယ် ဘဏ်သူဋ္ဌေးမဘဝမှ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ သီလရှင်တစ်ပါးဖြစ်လာသူ အကြောင်း	News
[ July 29, 2021 ] ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိခင်အတွက် နောက်ဆုံးစာလေး တစ်စောင် ရေးသားလိုက်တဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော်	Celebrity
November 29, 2020 Writer Magic 0
အဆိုတော်ပိုပိုကတော့ တေးသီချင်းလောကမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ပိုပိုက တေးရေး၊တေးဆိုတစ်ယောက်အဖြစ် သီချင်းလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီး အနုပညာလောကထဲမှာ လျှောက်လှမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုပိုရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းကလည်း နှစ်တစ်ခုထိရောက်လာပြီဖြစ်လို့ သီချင်းပေါင်းများစွာလည်း ထွက်ရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ ပိုပိုက လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ ချစ်သူကို အရမ်းသတိရနေတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ ခံစားသင့်သလောက်တော့ ခံစားတယ် ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်တာတွေ လည်းလုပ်နေတာပဲဆိုတော့လေ ဘုရားရှိခိုးရင်တော့ အဆင်ပြေပါစေဘာညာတော့ ဆုတောင်းပေးဖြစ်တာပေါ့ ကျန်တာကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်လို့ပဲ တွေးတာပေါ့နော် တကယ်က ငိုမယ်သီချင်းထဲကလို နင်မှမကောင်းခဲ့ဘဲဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး အပြင်မှာက […]
ဟေမာမန်းဝင်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ပါနော်။ကျရာ ဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ် ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ ဟေမာမန်းဝင်းက ဦးမန်းဝင်း မဆုံးခင်က ဆန္ဒလေး တစ်ခုကို ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဟေမာမန်းဝင်းက သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဇာတ်လမ်းတွဲကို ဦးမန်းဝင်းအနေနဲ့ ကြည့်ချင်ခဲ့ပေမယ့် မကြည့်လိုက်ရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တာပါ မင်းသားအနေနဲ့ ဒိုက်တော်တော်ကောင်းတယ် ဇော်ရဲနဲ့ ဒိုက်နဲ့ အရမ်းကောင်းတယ် ဒီကားက ဒါပေမယ့်ကောင်းတာလည်း မပြောနဲ့လေ ဘေးနားက ကိုကြီးနေမျိုးအောင်တို့ ဦးဗေဒါတို့ပေါ့နော် ထူးခန့်ကျော်တို့က […]
ပရိသတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောလေး အေးမြတ်သူကတော့ အနုပညာလောကမှာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အေးမြတ်သူရဲ့အပြုံးလေးတွေကို ပရိသတ်တွေကအရမ်းသဘောကျလွန်းလို့ ဖြူစင်တဲ့အပြုံးပိုင်ရှင်လေးလို့ တင်စားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အေးမြတ်သူက လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတ်သူက စိတ်ထားလေးဖြူစင်ပြီး မာန်မာနမကြီးတတ်လို့ လူချစ်လူခင်ကလည်းပေါများနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူကတော့ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ချစ်သူရှိကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြထားကာ မကြာခင်နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း ရွှေလက်တွဲလက်ထပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းကို အသိပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ အေးမြတ်သူက သူမရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ချစ်သူကို တိတိကျကျ အလင်းပြလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး (၇) ရက်သားသမီး […]
November 28, 2020 Writer Magic 0
ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေလင်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကိုအချိန်အတော်ကြာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တာပါ အခုအချိန်မှာတော့ ကိုနေလင်းဟာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ဒီလိုကူးစက်မှုဟာ မျက်လုံးကတဆင့် ကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကိုဗစ်ဘယ်လိုကူးသွားလဲဆိုတဲ့ သံသယလေးက ကျွန်တော်သတိမထားမိခဲ့တာတစ်ခုက ဒီမျက်မှန်ပေါ့ မျက်မှန်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လို မျက်မှန်တပ်တဲ့သူတွေသတိပိုထားရမှာပေါ့ ဒီလိုလည်ပင်းမှာချိတ်ထားမယ် ကျန်တာတွေကတော့ အကာအကွယ်ရှိတယ် သူ့မှာလည်း လေထုထဲကနေတဆင့် သူ့မှာအကာအကွယ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ ရောဂါပိုးတွေစင်ရောက်နိုင်တယ် အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့က မသိဘူး မျက်မှန်ကျတော့ […]
ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစုစာ ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတဦးဖြစ်သလို အနုပညာလောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း အားလုံးရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အရင်အတိုင်း ပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့ ထူးခြားတဲ့ လူချစ်လူခင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ယခုကိုဗစ်ကာလမှာတော့ မထက်ဟာ သိန်းထောင်နဲ့ချီတန် ကျောက်မျက်ရတနာ ကားနဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေကိုပါ Online ကတဆင့် ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မထက်ဟာ ယနေ့ ရောင်းချခဲ့တဲ့ Live Sale မှာ ကားအစီးရေ ၅၀ အထိ ဝယ်ယူအားပေးကြလို့ ဝမ်းသာမိတဲ့အကြောင်း ပရိသတ်ကို […]
October 19, 2020 SYL 0
Fans have been cheering for Ben Affleck asalynx. The news that Ben Afffeck has resigned as Lincoln came asashock to fans. Now there is good news for fans who are expecting […]
October 17, 2020 SYL 0
Actor Nick Cordero has died after months of contracting the COVID-19 virus, his wife Amanda Kelos has announced. Nick died at the age of 41. “Now God has another angel in heaven. My dear husband […]
October 14, 2020 SYL 0
This article is not only inspiring but also inspiring. It is aboutabeautiful woman who loses one leg but does not lose her smile and does not give up on life. Recently, the sad […]
October 11, 2020 SYL 0
Bollywood actress Priyanka Chopra is set to star in the fourth installment of The Matrix series. Predictions for The Matrix4have been circulating since January. Now, Priyan will be starring in the movie “The […]
October 7, 2020 SYL 0
Under Korean law, men between the ages of 18 and 28 living in Korea are required to serve in the military. They served in the military for two years. Male celebrities in Korea are not […]
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိခင်အတွက် နောက်ဆုံးစာလေး တစ်စောင် ရေးသားလိုက်တဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော်